I-China Chlorine Dioxide Air Sanitizer yokukhiqiza nefektri | FIZA
Chlorine Dioxide Amaphakethe 20 ...
Isithako esiyinhloko nenani lokuqukethwe: I-ClO2 (6g)
Ifomu Isikali: Ijeli
Usuku lokuphelelwa isikhathi: Izinyanga eziyi-1-2 ngemuva kokuvulwa.
I-chlorine dioxide air sanitizer iyi-sanitizer esebenza kahle futhi ivuselela umoya. Ingashesha ukufaka i-oxidize ama-microorganisms lapho ixhumana nayo, futhi ngaleyo ndlela ibulale amabhaktheriya noma ivimbele ukukhula kwawo.
Iyasebenza futhi iyasebenza:
Ukuhlolwa okwethulwe yinhlangano yobungcweti kukhombisa ukuthi izinga lokubulala amagciwane lejeli yokuhlanza umoya liphakeme ngama-99.9%.
Iyashesha futhi ihlala isikhathi eside:
Umkhiqizo uyakwazi ukwethula umphumela wokubulala amagciwane ngokushesha futhi ungasetshenziswa isikhathi eside.
Kuphephile futhi kusakazekile
Umkhiqizo awuyona i-carcinogenic, teratogenic, noma i-mutagenic kumuntu. Ukuphepha kwayo kubalwa njenge-A1 yiWorld Health Organisation.
Inani lokuqukethwe: 158g (150g gel, 8g bag activator)
Ngaphansi kwesimo esivamile, ibhodlela le-150g yokuhlanzwa komoya ingahlanza indawo cishe eyi-15-25 m2. Ingasetshenziswa endaweni yokusebenza, ewadini, ekhaya, ekilasini, ngaphakathi emotweni ... njll. Ingasetshenziselwa futhi ukufaka amagciwane kumaski.
1. Vula ikepisi elivaliwe lebhodlela
2. Thela sonke isifaki sesikhwama ebhodleleni
3. Shintsha ikepisi iye kulena enezimbobo zomoya kuyo, imile imizuzu engu-15.
4. Qiniseka ukuthi okuqukethwe kuqiniswe kwaba yi-colloid, uma sekuqinisiwe, kubeke phezulu phezulu ekamelweni. Ukulungisa isilinganiso sokukhishwa kokuqukethwe okusebenzayo, lungisa usayizi wezimbobo zomoya kusikhwama
Sicela ungatshekisi ibhodlela noma ulibeke ubheke phansi uma selivuliwe.
Sicela ungayifaki ngaphandle kokungena komoya kwewindi. Sicela ugweme ilanga eliqondile.
Uyacelwa ukuthi ungahogi ngqo lapho kuvulwa ibhodlela.
Sicela ugweme ukuxhumana nezingubo noma indwangu.
Uma igwinywe ngengozi, sicela uxhumane nodokotela ngokushesha.
Indawo okugcinwa kuyo kufanele yomile, ipholile futhi ingenisa umoya kahle, kude nokushisa nomlilo.
Langaphambilini I-Chlorine Dioxide Gel Powder
Olandelayo: Isiphepho Somoya
I-Chlorine Dioxide Liquid
I-Chlorine Dioxide Powder
Isixazululo Chlorine Dioxide
I-Chlorine Dioxide Inzalo